အသုံးပြုသူအား ဖတ်ရှုပြီး ဂရုတစိုက် ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းမပြုဘဲ အောက်ပါဝဘ်ဆိုဒ်များအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များကို အသုံးမပြုမီ စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့် အခြေအနေများ-
ဤစာတမ်းသည် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို တင်ပြသည် (“Terms“ - ဟုရည်ညွှန်းသည် ) သို့ဆိုလျှင် mp3download.to (”we”- သို့မဟုတ် “us”) သည် ၎င်း၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍ သင့်အား ဝန်ဆောင်မှုပေးပါမည်။ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောတစ်ခုအပါအဝင် (“website”) အဖြစ် စုပေါင်းရည်ညွှန်းပါသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းသည် ပါ၀င်သည့်ပါတီများအနေနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် သင်ကြားတွင် သဘောတူညီချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း၊ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်းနှင့် စာရင်းသွင်းခြင်း (ဤလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို “using”) ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် သင်နားလည်ပြီး လက်ခံကြောင်း ဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤစာတမ်းတွင် အသုံးပြုထားပြီး အတိအလင်းဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း၊ စည်းကမ်းချက်များ “you” နှင့် “your” တို့ကို သင် သို့မဟုတ် သင်၏ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဆက်ခံသူများ သို့မဟုတ်၊ တာဝန်ပေးသူများ၊ အပေါင်းအသင်းများ သို့မဟုတ် သင်၏ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများ ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများမှ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သင်သဘောမတူပါက၊ ထို့နောက် ဝဘ်ဆိုက်မှ ထွက်ခွာပြီး ၎င်းကိုအသုံးပြုခြင်းကို ရပ်လိုက်ပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ ဝဘ်ဆိုဒ်မှ ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုသည် ပြောင်းလဲခြင်းအမျိုးအစားမရှိဘဲ၊ ဤစာမျက်နှာတွင်ပါရှိသော စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်များကို လက်ခံခြင်းအပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ . ဝဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သင်သည် သတ်မှတ်စည်းကမ်းချက်များ၏ အပြည့်အဝလိုက်နာမှုနှင့် ပြီးပြည့်စုံသောသဘောတူညီချက်ကို ဖော်ပြနေပါသည်။
a. ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန်အတွက် သင်သည် အနည်းဆုံး အသက် 18 နှစ် ဖြစ်ရမည် သို့မဟုတ် သင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ အများစု၏ အသက်အရွယ်တွင် ဖြစ်ရမည်၊ ပိုကြီးတယ်။ အကယ်၍ သင်သည် အသက်အများစုမဟုတ်ပါက ဝဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြုရန် ဥပဒေအရ တားမြစ်ထားသည်။
b. စည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ သင်၏လက်ခံမှုကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းသည် ဤအကြောင်းအရာအတွက် ပုဒ်မ2အရ သင့်အား အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာ ထောက်ပံ့ကြေးကို ကျွန်ုပ်တို့ ပေးဆောင်လျက်ရှိသည်။
၂။ အသုံးပြုပိုင်ခွင့် ပေးအပ်ခြင်း
a. ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား သီးသန့်မဟုတ်သော၊ လွှဲပြောင်း၍မရသော၊ သတ်မှတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ရောက်ခွင့်၊ အများသူငှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသော၊ ဝဘ်ဆိုဒ်အတွင်း ရရှိနိုင်သော အကြောင်းအရာများ အပါအဝင်၊ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ ကန့်သတ်ချက်များ ကိုလည်း အသုံးပြုပါ။ သင်၏ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် အသုံးပြုမှုသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် စီးပွားရေးမဟုတ်သော ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာ ကန့်သတ်ထားသည်။
b. ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤထောက်ပံ့ကြေးအား မ��်သည့်အကြောင်းပြချက်နှင့်မဆို ကြိုတင်အသိပေးအကြောင်းကြားခြင်းဖြင့် သို့မဟုတ်မပါဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ရပ်စဲနိုင်ပါသည်။ ဤထောက်ပံ့ကြေးအား ရပ်ဆိုင်းလိုက်သောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် အောက်ပါတို့ကို ခိုင်းစေခြင်းမပြုရ- (i) သင့်အကောင့်ကို ဖယ်ရှားခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်း (ii) သင်၏ IP နှင့်/သို့မဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာများကို ပိတ်ပစ်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေများအောက်တွင် သင်၏အသုံးပြုမှုနှင့် ဝင်ရောက်နိုင်မှုကို လုံးဝရပ်ဆိုင်းလိုက်ခြင်း ဝဘ်ဆိုဒ်၊ နှင့်/သို့မဟုတ် သင့်အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များအားလုံးကို ဖျက်ပစ်ပါ။ ရပ်စဲပြီးနောက်၊ သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်’s ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုရန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုရန်ပင် ကြိုးပမ်းရန် သဘောတူပါသည်။ ရပ်စဲခြင်းနှင့်အတူ၊ သင်၏အသုံးပြုမှုထောက်ပံ့ကြေးကိုလည်း ရုတ်သိမ်းသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ သို့သော် ဤစည်းမျဥ်းများ၏ အခြားကဏ္ဍများအားလုံး ဆက်လက်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အတွက် သို့မဟုတ် မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကိုမျှ အဖြေမပေးနိုင်ကြောင်း သင်လက်ခံပါသည်။
a. အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များကို ဤကဏ္ဍတွင် သင်တင်သွင်း၊ မွမ်းမံထားသော၊ ဖန်တီးထားသော သို့မဟုတ် အပါအဝင် ဝဘ်ဆိုက်မှတစ်ဆင့် ရရှိနိုင်သည့်အရာအားလုံးအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည် ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် သင်ဖန်တီး၊ ထုတ်လွှင့်ပြီး ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ထားသည့် မည်သည့်အသံ/အသံဖိုင်များမဆို။ အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များကို အမြဲတမ်းပြန်ရုတ်သိမ်းခြင်း၊ ရုတ်သိမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပြောင်းပြန်လှန်ခြင်းများ ပြုလုပ်၍မရပါ။ User Submissions တွင် ပါဝင်သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များသည် သင့်အား ခွဲခြားသိမြင်နိုင်စေနိုင်ပြီး အသုံးပြုသူတင်ပြမှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် လျှို့ဝှက်ချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံမည်မဟုတ်ကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
b. သင်၏အသုံးပြုသူတင်ပြမှုများနှင့် အပ်လုဒ်တင်ခြင်း၊ ဖန်တီးခြင်း၊ တင်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် အခြားအခြေအနေများအောက်တွင် အလုံးစုံတာဝန်ယူရမည်၊ User Submissions များကို ရရှိနိုင်စေရန်။ သင်၏အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များအားလုံးအတွက်၊ သင်သည် ၎င်းကိုကြေညာရန်၊ အတည်ပြုပြီး ခွင့်ပြုသည်-
i. သင်သည် ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့အား အသုံးပြုရန်နှင့် အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ခွင့်ပြုချက်များနှင့် ဝဘ်ဆိုဒ်အား အသုံးပြုသူ၏ တင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မူပိုင်ခွင့်များ၊ အမှတ်တံဆိပ်များ၊ နှင့် မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာအခွင့်အရေးများအားလုံးနှင့် အသုံးပြုရန်အတွက် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍၊ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းများ က မျှော်လင့်ထားသည်၊
ii. မည်သူ့ကိုမျှ ပို့စ်တင်ခွင့်မပြု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ညစ်ညမ်းသော လုပ်ရပ်များကို ဖော်ပြပြီး ပြသသည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ နှင့်
iii. သင်တစ်ဦးစီထံမှ စာဖြင့်ရေးသားခွင့်ပြုချက်နှင့် သဘောတူညီချက် ရှိသည်၊ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းများမှ မျှော်လင့်ထားသော အသုံးပြုမှုအားလုံးအတွက် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များတွင် ဤပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်/သို့မဟုတ် အမည်ကို အသုံးပြုရန် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များတွင် အတည်ပြုနိုင်သော တစ်ဦးချင်းစီ။
c. ထို့ပြင်၊ သင်သည် ဖန်တီးခြင်း၊ ပို့ခြင်း၊ တင်ပြခြင်း၊ အပ်လုဒ်လုပ်ခြင်း၊ ရရှိနိုင်စေမည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရဟု ဝန်ခံပါသည်-
i. သင့်အး မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် ကုန်သွယ်မှုလျှို့ဝှက်ဥပဒေများဖြင့် ကာကွယ်ထားသည်။ လူသိရှင်ကြားနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအခွင့်အရေးများပါ၀င်သော ပြင်ပကုမ္ပဏီပိုင်အခွင့်အရေးများကို လက်အောက်ခံသူများ၊ သင်သည် ထိုအခွင့်အရေးများကို မပိုင်ဆိုင်ပါက သို့မဟုတ် ထိုပစ္စည်းများကိုတင်ပြရန် ပိုင်ရှင်ထံမှ ပြတ်ပြတ်သားသားခွင့်ပြုချက်မရရှိပါက၊ ၎င်းတွင်ပေးထားသော လိုင်စင်အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကျွန်ုပ်တို့အား မပေးပါက၊
ii. လိမ်လည်မှု၊ အသရေဖျက်မှု၊ တရားမဝင်မှု၊ ညစ်ညမ်းမှု၊ အောက်တန်းကျမှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်ဦးတည်းဆုံးဖြတ်ချက်အရ အမုန်းပွားခြင်း၊ လူမျိုးရေးအရ စော်ကားခြင်း သို့မဟုတ် အခြားနည်းဖြင့် မသင့်လျော်ပါ။
iii. တိရစ္ဆာန် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှု၊ တရားမဝင် လုပ်ဆောင်မှုများနှင့် အားပေးမှုများ ပါ၀င်သည် လူတစ်ဦးချင်း သို့မဟုတ် အုပ်စုများ အတွက် အကြမ်းဖက်မှုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုများ။
iv. လူတစ်ဦး သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ လွဲမှားစွာတင်ပြမှုတစ်ခု၊ အတုပြုလုပ်ခြင်းအပါအဝင်၊ အထောက်အထား
v. ရာဇ၀တ်မှုတစ်ခုအတွက် ညွှန်ကြားချက်များနှင့် အားပေးမှုများ ပါ၀င်သည် (ဥပမာ၊ လူသတ်မှု သို့မဟုတ် ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်းများပြုလုပ်ခြင်း)၊ မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် ပါတီ၏အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြည်တွင်း၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာတွင်ဖြစ်စေ မည်သည့်ဥပဒေအားမဆို ချိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ခံရနိုင်ခြေရှိစေမည့် သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်မှုဖြစ်စေသော၊
vi. မတောင်းဆိုသော သို့မဟုတ် မခိုင်လုံသော ကြော်ငြာများ၊ စပမ်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ပုံစံ ပါ၀င်သည် မေတ္တာရပ်ခံခြင်း။
d. သုံးစွဲသူ တင်ပြချက်များ သို့မဟုတ် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာအပေါ် ကျွန်ုပ်တို့ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုင်ဆိုင်မှု မရှိဟု ယောင်ဆောင်ပါသည်။ သင် သို့မဟုတ် ပြင်ပကုမ္ပဏီလိုင်စင်ရှိသူသည် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များအပေါ် အခွင့်အရေးကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားမည်ဖြစ်ပြီး အဆိုပါအခွင့်အရေးများကို သင့်လျော်သည်ဟု မှတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။ ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဤစည်းမျဉ်းများအတိုင်း ကြိုတင်မှာကြားခြင်းမရှိဘဲ အပါအဝင် မည်သည့်ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဆို အသုံးပြုသူတင်ပြမှုများကို စီမံဖန်တီးရန်၊ မျိုးပွားရန် သီးသန့်၊ တော်ဝင်ခံစားခွင့်မရှိသော၊ လိုင်စင်ခွဲပေးနိုင်သော လိုင်စင်ကို သင် ကျွန်ုပ်တို့အား နောက်ပြန်မဆုတ်ဘဲ ပြန်ထုတ်ပေးပါသည်။ အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အခြားအသုံးပြုသူများအပေါ် အရေးဆိုမှုများနှင့် အခိုင်အမာပြောဆိုမှုများအားလုံးကိုလည်း ရုတ်သိမ်း၍မရပါ။
e. အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များအတွင်း ပေးအပ်သည့်အခွင့်အရေးများကို ပေးအပ်ရန် သင့်တွင် လိုအပ်သော ပါဝါ၊ ရပိုင်ခွင့်များနှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များအားလုံးကို ဖော်ပြပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ သင်သည် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များအတွက် ခေါင်းစဉ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ကြောင်း အမျိုးအစားခွဲ၍ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ဖော်ပြပြီး ခွင့်ပြုပေးကာ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များကို အပ်လုဒ်လုပ်ရန်၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် ရရှိစေခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်နိုင်စေမည်ဖြစ်သည် အခြားမည်သည့်ပါတီ၏အခွင့်အရေးကိုမျှ မချိုးဖောက်ပါနှင့်။
f. အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များကို အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ သို့မဟုတ် ကြိုတင်သတိပေးချက်မပါဘဲ ထုတ်ဝေရန်၊ ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် တားဆီးခြင်းအား တားမြစ်နိုင်ကြောင်း သင်သဘောတူပါသည်။ .
g. သင်၏အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များ သို့မဟုတ် သင်၏အသုံးပြုမှုကို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းက အခိုင်အမာပြောဆိုသည့် မည်သည့်အရေးဆိုမှု သို့မဟုတ် တရားစွဲဆိုမှုမှ ကျွန်ုပ်တို့အား ခုခံကာကွယ်ရန် သဘောတူကြောင်း သင်သဘောတူကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်သည် မည်သည့်ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ကိုမဆို ချိုးဖောက်ပါသည်။ ထိုသို့သောတောင်းဆိုမှုများ သို့မဟုတ် တရားစွဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်၍ ကျွန်ုပ်တို့ထံပေးဆောင်သည့် အခကြေးငွေများနှင့် ရှေ့နေ ’s နှင့် ဆုံးရှုံးမှုများအတွက် ကျွန်ုပ်တို့အား လျော်ကြေးပေးရန် သင်သဘောတူပါသည်။
a. ဝဘ်ဆိုက်’s အကြောင်းအရာ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာနှင့် အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များ မပါဝင်ဘဲ၊ အပါအဝင် အခြားအရာအားလုံးအပါအဝင်၊ စာသား၊ လိုဂိုများ၊ ဝန်ဆောင်မှုအမှတ်အသားများ၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဒီဇိုင်းများ၊ ဂရပ်ဖစ်ရုပ်ပုံများ စသည်တို့ကို ကျွန်ုပ်တို့မှ ပိုင်ဆိုင်ပြီး/သို့မဟုတ် လိုင်စင်ရထားပါသည်။ (၎င်းကို ”Proprietary Materials.”) မူပိုင်ခွင့်နှင့် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေများအောက်တွင် ရှိပြီး တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဧရိယာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ဥပဒေမှန်သမျှကို ဤစာတမ်းတွင် စုပေါင်းသိရှိထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ မူပိုင်ပစ္စည်းများအပေါ် အခွင့်အရေးအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။
b. သင့်တွင် စာဖြင့်ခွင့်ပြုချက် သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုချက်မရပါက၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လွှင့်ခြင်း၊ ထုတ်ဝေခြင်း၊ သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းတွင် ပါဝင်ရန် သို့မဟုတ် လွှဲပြောင်းခြင်းတွင် ပါဝင်ခြ်းမပြုရန် သဘောတူပါသည်။ မည်သည့်အကြောင်းအရာမဆို ဆင်းသက်လာသော လက်ရာများကို ရောင်းချခြင်း။
၅။ ဝဘ်ဆိုဒ်’s အကြောင်းအရာ
a. ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုသည့်အခါ၊ သင်သည် အမျိုးမျိုးသော ရင်းမြစ်များမှ အကြောင်းအရာများကို အမိုးအကာမရှိဟု နားလည်လက်ခံပြီး၊ အခြားပုဂ္ဂိုလ်များ သို့မဟုတ် ပါတီများမှ ရရှိနိုင်သော ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ အကြောင်းအရာများ အပါအဝင် (“ Third-Party Content”) ဟု ရည်ညွှန်းနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိပါ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း၏ အကြောင်းအရာများကို သေချာပေါက် ထိန်းချုပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သင်ကန့်ကွက်စရာ သို့မဟုတ် သင့်ကွန်ပြူတာစနစ်များကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့် အရာများပါ၀င်နေနိုင်သည့် စော်ကားနိုင်သော၊ မေးခွန်းထုတ်စရာ သို့မဟုတ် မမှန်ကန်သော ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းအကြောင်းအရာနှင့် ထိတွေ့နိုင်သည်ကို သင်လက်ခံပြီး အသိအမှတ်ပြုကြောင်းနှင့် ဤဥပဒေကြောင်းအရ ကုစားခြင်း သို့မဟုတ် သင့်မျှတသောအခွင့်အရေးကို စွန့်လွှတ်ရန် သဘောတူပါသည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍၊
b. ကျွန်ုပ်တို့သည် Third-Party အကြောင်းအရာကို ပိုင်ဆိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိပါ။ Third Party များသည် Third-Party Content ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးအားလုံးကို ကိုင်ဆောင်ထားပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့အခွင့်အရေးများကို ထိုက်သင့်သလောက် ကာကွယ်ခြင်းအတွက် ဖြေကြားပေးနိုင်သည်။
c. မသင့်လျော်သောအပြုအမူ သို့မဟုတ် အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ခြေရာခံရန် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မရှိကြောင်း သင်လက်ခံပြီး သဘောတူပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ တစ်ဦးတည်းသောဆုံးဖြတ်ချက်ဖြင့် ထိုအကြောင်းအရာကို စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသည့်အခါတွင်၊ ထိုအကြောင်းအရာအတွက် ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်ရှိမည်မဟုတ်သည့်အပြင် အဆိုပါအကြောင်းအရာကို ဖယ်ရှားရန် သို့မဟုတ် ပြုပြင်ရန် တာဝန်မရှိသည့်အပြင် အဆိုပါအကြောင်းအရာကို တင်ပြသည့်ပါတီများ သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းစီ၏ အပြုအမူအတွက် တာဝန်မယူပါ (ဤ အသုံးပြုသူတင်ပြမှုများနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်း အကြောင်းအရာများ ပါဝင်သည်။)
၆။ အသုံးပြုသူ ကျင့်ဝတ်
a. သင် ပံ့ပိုးပေးထားသည့် အချက်အလက်အားလုံးနှင့် သင်တင်ပြသော အကြောင်းအရာသည် တိကျပြီး ခေတ်မီကြောင်း ပြသပြီး ခွင့်ပြုပေးပါသည်။ သင့်တွင် လိုအပ်သော အခွင့်အရေးများ၊ အခွင့်အာဏာနှင့် (i) ဤစည်းမျဥ်းများကို လိုက်နာရန် အခွင့်အာဏာများ ရှိသည်၊ (ii) သင်၏ အသုံးပြုသူ တင်ပြချက်များကို ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ရန်၊ amd (iii) ဤစည်းမျဥ်းများအားဖြင့် သင့်အတွက် လိုအပ်သည့် လုပ်ရပ်များကို လုပ်ဆောင်ပါ။
b. ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့် စောင့်ကြည့်ရန် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြတ်ပြတ်သားသား အခွင့်အာဏာပေးပါသည်။
c. ထို့ကြောင့် သင်သည် ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး ဤဥပဒေဖြင့် သင်သဘောတူသည်-
i. မည်သည့်တရားမ၀င် သို့မဟုတ် ဥပဒေမဲ့ရည်ရွယ်ချက်အတွက်မဟုတ်ဘဲ ဝဘ်ဆိုဒ်ကို တရားဝင်အသုံးပြုရန်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းများကို ချိုးဖောက်သည့် မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို၊
ii. တည်ဆဲဥပဒေများနှင့် နည်းဥပဒေများအားလုံးကို အသိအမှတ်ပြုရန် ၂၂၂၂-၊ -0-- ပြည်တွင်း၊ အမျိုးသား၊ သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ၊
iii. ကျွန်ုပ်တို့ကို ဦးတည်စေမည့် နည်းလမ်းဖြင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို မသုံးပါနှင့်။ ရာဇ၀တ်မှုနှင့် အရပ်ဘက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖော်ထုတ်ရန်၊
iv. ဖြစ်နိုင်သော လုပ်ရပ်များနှင့် ပျ်ကွက်မှုများ အားလုံးအတွက် တာဝန်ယူရန်၊ ဝဘ်ဆိုဒ်ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ရလဒ်အဖြစ်ဖြစ်ပေါ်;
v. ငါတို့ကို ပေးဆောင်ရန် အခွင့်အရေး နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့် အားလုံးရှိသည် ။ သင်၏အသုံးပြုသူတင်ပြချက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတဆင့် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့ကို ကိုင်တွယ်စီမံပါ။
vi. မည်သည့်ဒေတာတူးဖော်ရေးကိရိယာများ၊ စက်ရုပ်များ၊ စာရေးကိရိယာများ မသုံးရပါ။ သို့မဟုတ် အခြားသော အလိုအလျောက် ဆိုသည်မှာ ဝဘ်ဆိုက်မှ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဒေတာကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်း ၊
vii. မည်သူ့ကိုမျှ အနှောင့်အယှက်မဖြစ်စေရန်၊ ;
ix. မူရင်းကို ဖုံးကွယ်ထားသည့် ခေါင်းစီးများ သို့မဟုတ် အခြားဒေတာကို အတုမယူရန်၊ ပို့လွှတ်လိုက်တဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ၊
x. ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဝင်မစွက်ဖက်ရန် ၂၂၂၂--၀-- လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အင်္ဂါရပ်များသည် အကြောင်းအရာကို ကူးယူခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းကို ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် ဟန့်တားခြင်း သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုက် သို့မဟုတ် ၎င်း၏ အကြောင်းအရာကို အသုံးပြုခြင်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသော၊
xi. ဝဘ်ဆိုက်ကို စီးပွားရေးအရ အမြတ်ထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ၎င်း၏အကြောင်းအရာကို ရရှိအောင် မလုပ်ရန် မည်သည့်တတိယပါတီကိုမဆို။ ဝဘ်ဆိုဒ်၏ မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းသို့ လိုင်စင်၊ ရောင်းချ၊ လွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုကြောင်း သင် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။
xii. ဗိုင်းရပ်စ်များပါရှိသော ဝဘ်ဆိုက်အကြောင်းအရာမှတဆင့် မရရှိနိုင်စေရန်၊ ကွန်ပျူတာစနစ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ ဟာ့ဒ်ဝဲ သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖျက်ဆီးရန် ဖန်တီးထားသည့် မည်သည့်ဖိုင်နှင့် ပရိုဂရမ်များ၊
xiii. “mirror” သို့ မဟုတ်၊ ” သို့မဟုတ် “frame” သင့်ကိုယ်ပိုင်ဝဘ်ဆိုဒ် သို့မဟုတ် အခြားဝဘ်ဆိုဒ်များတွင် ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် အဓိပ္ပာယ်၊
xiv. ဝဘ်ဆိုက်၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှ ပြောင်းပြန်အင်ဂျင်နီယာ မလုပ်ရန်။
d. အသုံးပြုမှုကို ရပ်စဲခြင်းအပါအဝင် ဝဘ်ဆိုက်အား တရားမဝင်အသုံးပြုသူတိုင်းအား သက်ဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ အာမခံပါသည်။ ဤစည်းမျဥ်းများတွင် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိသော ဝဘ်ဆိုက်အသုံးပြုမှုမှန်သမျှသည် တရားမဝင်ကြောင်းနှင့် ခွင့်ပြုချက်မရှိဟု ယူဆရပြီး ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ကာ အချို့သော ဒေသန္တရ၊ နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ခြင်းလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။
e. အသုံးပြုမှုကို ရပ်စဲခြင်းအပြင် အပိုင်း6(အသုံးပြုသူကျင့်ထုံး) ပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်များအပါအဝင် သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ပါက သင့်အား စေခိုင်းမည်ဖြစ်သည်။ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုစီအတွက် $10,000 ($10,000) (ဒေါ်လာတစ်သောင်း) ရှိသော နစ်နာကြေးအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးနိုင်သည်။ ချိုးဖောက်မှုသည် ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူခြင်း သို့မဟုတ် မည်သည့်ပါတီကိုမဆို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဖြစ်စေပါက၊ ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုစီအတွက် ဒေါ်လာ 150,000 (ဒေါ်လာ 150,000 (တစ်သိန်းငါးထောင်)) ကို လျော်ကြေးပေးရန် သင့်အား တုံ့ပြန်ရမည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ၊ သင်မှားခဲ့သော မည်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ ဤပြောင်းလဲထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများသည် ပြစ်ဒဏ်များမဟုတ်သော်လည်း ချိုးဖောက်မှုတစ်ခုပြီးနောက် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် ပျက်စီးမှုအတိုင်းအတာကို အတည်ပြုရန် ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး၏ ကြိုးပမ်းချက်ဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော ပမာဏသည် အနိမ့်ဆုံးဖြစ်ပြီး ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုမှာ ဖော်ပြထားသည့် ပမာဏထက် ပိုများနေမည်ဆိုပါက အဆိုပါပမာဏထက် ပိုများပါက သင့်တွင် တာဝန်ရှိပါသည်။ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိသော တရားရုံးတစ်ခုသည် ဖျက်သိမ်းလိုက်သော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို လိုက်နာရန် မဖြစ်နိုင်ကြောင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်ပါက၊ ယင်းပမာဏကို ကျင့်သုံးနိုင်သည့်အတိုင်းအတာအထိ ပမာဏကို လျှော့ချရမည်။
a. ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက်နှင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ သို့သော် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် သင့်အား YouTube တွင် တေးဂီတရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် သင့်အား YouTube ပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုများမှ အသံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို ဘယ်တော့မှ ခွင့်မပြုပါဘူး။
a. ဝဘ်ဆိုဒ်သည် ယေဘူယျရည်ရွယ်ချက် ကိရိယာနှင့် ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖြစ်ကြောင်း သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အထူးသဖြင့်၊ သို့သော် ကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲ၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် သင့်အား YouTube တွင် တေးဂီတရှာဖွေရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ဝဘ်ဆိုက်သည် သင့်အား YouTube ပေါ်ရှိ ဗီဒီယိုများမှ အသံကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုထားသည်။ ထို့ကြောင့် ဝဘ်ဆိုဒ်ကို ဤရည်ရွယ်ချက်နှင့်အညီသာ အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဥပဒေချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကို ��ယ်တော့မှ ခွင့်မပြုပါဘူး။
b. အသုံးပြုသူများ ၎င်းတို့၏ အကြောင်းအရာကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန် အချိန်တိုတိုနှင့် သင့်လျော်သော အချိန်ကာလတစ်ခုအထိ သုံးစွဲသူများ၏ တင်ပြချက်များကို သိမ်းဆည်းခြင်း သို့မဟုတ် သိမ်းဆည်းခြင်း မပြုပါ။
a။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏ဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးတွင် ငွေပေးချေမှုကို ပြဌာန်းရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အခကြေးငွေနှင့် စာရင်းသွင်းမှုများကို အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲမှုပြုလုပ်ရန် အခွင့်ကို သင်အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အကယ်၍ သင်သည် ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများကို ချိုးဖောက်ပြီး သင်၏ထောက်ပံ့မှုကို ရပ်ဆိုင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါက၊ အပြည့်အဝ သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်စေ ပြန်အမ်းငွေကို သင့်တွင် ဆုပ်ကိုင်ထားမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်၊ ထိုအခကြေးငွေများကို ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် ကြေငြာမည့်နောက်ထပ် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ၊ စည်းမျဉ်းများ၊ သဘောတူညီချက်များ သို့မဟုတ် ငွေပေးချေမှုလုပ်ဆောင်နေသည့် ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အရောင်းကိုယ်စားလှယ်တစ်ခုခုမှ တည်ထောင်ထားသည့် ဝဘ်ဆိုက်နှင့်/သို့မဟုတ် တည်ထောင်မည့် အခြေအနေများဖြင့် အချိန်နှင့်အမျှ ထိန်းညှိပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
a. ကျွန်ုပ်တို့သည် သီးခြားကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ထားရှိထားပြီး ဤစည်းမျဥ်းများကို သင်လက်ခံခြင်းသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒအတွက် သင်၏သဘောတူညီချက်ကို အလိုအလျောက် ကိုယ်စားပြုပါသည်။ ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ထိုသို့သော ပြင်ဆင်ချက်များကို တင်ခြင်းဖြင့် မည်သည့်အချိန်တွင်မဆို ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမူဝါဒကို ပြင်ဆင်ပိုင်ခွင့်ကို ကျွန်ုပ်တို့ ဆုပ်ကိုင်ထားသည်။ ’ တွင် တင်ခြင်းမှလွဲ၍ ဤပြင်ဆင်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အား ကြောင်းကြားမည်မဟုတ်ပါ။ ဤပြင်ဆင်ချက်များကို တင်ပြီးနောက် ဝဘ်ဆိုက်ကို သင်ဆက်လက်အသုံးပြုပါက၊ ၎င်းသည် သင်မဖတ်ရသေးသည့်တိုင် အပြောင်းအလဲများကို သင့်လက်ခံမှုကို တည်စေပါသည်။
a. အခြားသူများ၏ ဉာဏမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ကျွန်ုပ်တို့ လေးစားလိုက်နာပါသည်။ သင်သည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်၊ အဖွဲ့ သို့မဟုတ် ပါတီ၏ အမှတ်တံဆိပ်၊ မူပိုင်ခွင့် သို့မဟုတ် အခြားသော မူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်ဆိုင်ရာ အခွင့်အရေးများကို ထိပါးခြင်း သို့မဟုတ် ချိုးဖောက်ရန် ခွင့်မပြုပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသူများ၏ ဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးများကို ချိုးဖောက်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ယူဆထားသည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို ဖယ်ရှားပိုင်ခွင့်ရှိပြီး ထိုအကြောင်းအရာကို တင်ပြခြင်းသည် သင်၏အသုံးပြုခွင့်ကို ရပ်စဲသွားစေနိုင်ပါသည်။
b. ကျွန်ုပ်တို့၏ ထပ်ခါတလဲလဲ ချိုးဖောက်မှု မူဝါဒ၏ ကဏ္ဍတစ်ခုအနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆက်စပ်နေသည့် မည်သည့်နေရာတွင်မဆို ထိရောက်ပြီး ယုံကြည်သော တိုင်ကြားချက် သုံးခုကို လက်ခံရရှိသည့် အကြောင်းအရာကို တင်သွင်းသည့် အသုံးပြုသူတိုင်း၊ ခြောက်လတာကာလအတွင်း ၎င်းတို့၏ ဝဘ်ဆိုဒ်အသုံးပြုမှုကို ရပ်ဆိုင်းမည်ဖြစ်သည်။
c. ကျွန်ုပ်တို့သည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ ဥပဒေအောက်တွင် မရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် DMCA သို့မဟုတ် Digital Millennium မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေအား လိုလိုလားလား လိုက်နာပါသည်။ DMCA အရ၊ အထူးသဖြင့် United States Code ၏ ပုဒ်မ 512(ဂ)(2) ၏ ခေါင်းစဉ် 17၊ ပုဒ်မ 512(c)(2) အရ၊ သင်၏ မူပိုင်ခွင့်ရထားသော အရာသည် ဝဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် ချိုးဖောက်ခံနေရသည်ဟု ယုံကြည်ရန် အကြောင်းပြချက်ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား လက်ခံရရှိသည့် အေးဂျင့်ကို ခန့်အပ်နေပါသည်။ တောင်းဆိုမှုများနှင့် အသိပေးချက်များ။ တောင်းဆိုချက်များနှင့် အသိပေးချက်များအားလုံးကို [email protected] သို့ အီးမေးလ်ပို့ရပါမည်။
d. သင့်လျော်မှုမရှိသော သို့မဟုတ် တရားဝင်မလုံလောက်သော ချိုးဖောက်မှုဆိုင်ရာ အသိပေးချက်အားလုံးကို အရေးယူဆောင်ရွက်မည်မဟုတ်ပါ။ သက်ဆိုင်ရာ အသိပေးချက်တွင်-
i. မူပိုင်ခွင့်ရထားသော အလုပ်ဖော်ပြချက် ဖောက်ဖျက်သည်ဟု ယူဆရသည်။ မိတ္တူ သို့မဟုတ် မိတ္တူ သို့မဟုတ် အလုပ်၏ တရားဝင်ခွင့်ပြုထားသောဗားရှင်းသို့ လင့်ခ်များ ထည့်သွင်းပါ။
ii. ကျွန်ုပ်တို့ကို ဖွင့်ပေးမည့် URL ကဲ့သို့သော အခြားသက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို ထည့်ပါ ပစ္စည်းရှာရန်။
iii. သင်၏ ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက် ဖြစ်သည့် ဖုန်းနံပါတ် လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ။
iv. သစ္စာရှိ၌ ယုံကြည်ခြင်းကို ဖော်ပြသော ကြေငြာချက် (အောက်တွင်၊ မမှန်မကန် ပြစ်ဒဏ်)၊ သင် သို့မဟုတ် သင့်အေးဂျင့်များမှ ဥပဒေအရ အခွင့်အာဏာမရှိသော၊
v. တင်ပြထားသည့် အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ကြေညာချက်တစ်စောင်၊ သင်သည် ချိုးဖောက်သည်ဟု ယူဆရသော အလုပ်၏ ပိုင်ရှင် (သို့မဟုတ်) ပိုင်ရှင်မှ အခွင့်အာဏာရှိသည်။
vi. A လက်မှတ်၊ it’s ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် အီလက်ထရွန်းနစ်၊ မူပိုင်ခွင့်ကိုင်ဆောင်သူ သို့မဟုတ် ၎င်း၏လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ထံမှ။
e. တရားမျှတမှု စိတ်ဓာတ်ဖြင့်၊ ဝဘ်ဆိုဒ်သို့ ရှာဖွေမှုရလဒ် သို့မဟုတ် တင်ပြမှုတစ်ခုအား တောင်းဆိုထားသော မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်မှဆိုင်ရာ အကြောင်းကြားချက်ကြောင့် ဖယ်ရှားခံရပါက၊ အောက်ပါတို့ပါဝင်သည့် တန်ပြန်သတိပေးချက်ကို ပေးဆောင်ပါ-
i. သင်၏ လက်မှတ်သည် အီလက်ထရွန်းနစ် သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံစံဖြစ်စေ။
ii. မေးခွန်းရှိပစ္စည်း၏ ဖော်ပြချက်နှင့် ဖြစ်နိုင်ပါက၊ ပစ္စည်း၏တည်နေရာကိုဖယ်ရှားခြင်းမပြုမီပေါ်လာသည်။
iii. လိမ်လည်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးသည့် ကြေညာချက်တစ်ရပ်၊ ဖယ်ရှားခံရခြင်းသည် မှားယွင်းမှု သို့မဟုတ် မှားယွင်းသတ်မှတ်ခြင်း၏ ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ချက်ရှိပါ။
iv. သင့်အမည်၊ လိပ်စာ၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ နှင့် သင်၏ပေးထားသောလိပ်စာ၊ Anguilla ရှိ ’s စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိ တရားရုံးသို့ သင်ခွင့်ပြုသည့် သက်သေခံစာနှင့် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်၏တည်နေရာသည် တည်ရှိပါသည်။
v. လုပ်ငန်းစဉ်များမှ ဝန်ဆောင်မှုကို အသိအမှတ်ပြုမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေငြာချက် မူပိုင်ခွင့်ပိုင်ရှင်အမည်ခံ သို့မဟုတ် ၎င်း၏ တရားဝင်ကိုယ်စားလှယ်။
၁၂။ လွှတ်ပေးခြင်းနှင့် လျော်ကြေးပေးခြင်း
a. သင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား လျော်ကြေးပေးရန်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့အား ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းမှ တောင်းဆိုမှုများ၊ နစ်နာမှုနှင့် ကုန်ကျစရိတ်များအားလုံးတို့မှ အပြစ်မရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား ပေးဆောင်ထားကြောင်း၊ ရှေ့နေ’s အခကြေးငွေများ သင့်ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် စည်းမျဥ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ဖောက်ဖျက်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော အခကြေးငွေများ။
b. သင်သည် အခြားအသုံးပြုသူ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် အခြားတတိယအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုနှ့် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားပါက မည်သူမဆိုအပါအဝင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လွှတ်ပေးရန် သဘောတူညီပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ဆက်ခံသူ-အခွင့်အရေးများ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ တောင်းဆိုချက်များ၊ အမျိုးအစားနှင့် သဘာဝ၏ အမှန်တကယ် နှင့် အကျိုးဆက် ဆုံးရှုံးမှုများ၊ သံသယ သို့မဟုတ် မသင်္ကာဖွယ်၊ သိထားသော သို့မဟုတ် မသိရသေးသော၊ ထုတ်ဖော် သို့မဟုတ် မဖော်ပြသေးသော၊ သို့မဟုတ် ဤအငြင်းပွားမှုများနှင့် ဆက်စပ်နိုင်သည့် မည်သည့်အရာမဆို၊ / သို့မဟုတ် ဝဘ်ဆိုဒ်။
၁၃။ အာမခံချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ၏ ကန့်သတ်ချက်များ
a. ကျွန်ုပ်တို့၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို သက်ဆိုင်ရာဥပဒေအောက်တွင် ခွင့်ပြုနိုင်သည့်အမြင့်ဆုံးအတိုင်းအတာအထိ ကန့်သတ်ထားသောကြောင့် ဤအပိုင်းကို သေချာစွာဖတ်ရှုပါ။ နောက်ထပ်)။
b. ဤဝဘ်ဆိုက်တွင် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် လုံးဝကင်းကွာသော ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လင့်ခ်များ ရှိနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အဆိုပါ ပြင်ပဝဘ်ဆိုက်များ ’ အကြောင်းအရာ၊ ကျင့်ထုံးများ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မူဝါဒများနှင့် အချက်အလက်များ၏ စစ်မှန်မှုတို့အတွက် ဖြေကြားနိုင်သော သို့မဟုတ် တာဝန်မရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ don’ ဤဝဘ်ဆိုက်များ၏ အကြောင်းအရာကို တည်းဖြတ်ရန်နှင့် ပြင်ဆင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။ ဤတတိယပါတီ ဝဘ်ဆိုက်များကို သင်အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သည့် မည်သည့်အရာမှ ကျွန်ုပ်တို့တွင် တာဝန်မကင်းကြောင်း သင်လက်ခံပါသည်။ ။ ဆိုလိုသည်မှာ သင်သည် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင့်ကိုယ်ပိုင်စွန့်စား၍ အသုံးပြုနေပြီး အာမခံ၊ ပြဌာန်းချက် သို့မဟုတ် အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်ခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားနိုင်မှု၊ ချိုးဖောက်မှုမဟုတ်သော၊ သတင်းအချက်အလက်တိကျမှု၊ ပေါင်းစပ်မှု၊ သီးခြားရည်ရွယ်ချက်အတွက် သင့်လျော်မှု၊ ငြိမ်သက်ပျော်ရွင်မှု သို့မဟုတ် အပြန်အလှန်လုပ်ဆောင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ ဆက်စပ်အာမခံချက်မှန်သမျှကို ကျွန်ုပ်တို့ အတိအလင်းနှင့် အထူးတလည် ငြင်းဆိုထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုက်နှင့် ဝဘ်ဆိုက်’s ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဗိုင်းရပ်စ်များ၊ မဲလ်ဝဲနှင့် အခြားအန္တရာယ်ရှိသော အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အာမခံချက်တစ်စုံတစ်ရာကို ကျွန်ုပ်တို့ ငြင်းဆိုထားသည်။ သွယ်ဝိုက်အာမခံချက်များအား ငြင်းဆိုထားခြင်းကို ခွင့်မပြုသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအချို့ရှိပါသည်၊ ထို့ကြောင့် အာဏာပိုင်နယ်ပယ်များတွင်၊ အထက်ဖော်ပြပါ ငြင်းဆိုချက်များသည် သင့်အတွက် အကျုံးဝင်မည်မဟုတ်ပါ သို့မဟုတ် ယင်းကဲ့သို့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောအာမခံချက်များနှင့် ပတ်သက်နေသရွေ့ ၎င်းတို့သည် အကန့်အသတ်ရှိပါသည်။
d. ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုက်ရိုက်၊ သွယ်ဝိုက်သော၊ မတော်တဆ၊ ထူးခြားသော၊ နောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များ သို့မဟုတ် အတုယူဖွယ်ရာ ထူးခြားမှုများအတွက် တာဝန်ဝတ္တရားမရှိစေရပါ။ ကန့်သတ်ချက်ရှိရှိ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို သင်အသုံးပြုမှုတွင် အဆိုပါပျက်စီးမှုများသည် (i) သင်အသုံးပြုမှု၊ လွဲမှားမှု၊ လွဲမှားမှု သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကို အသုံးပြု၍မရသော၊ (ii) ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်ရှိ မည်သည့်အကြောင်းအရာအပေါ်တွင်မဆို သင်မှီခိုနေရခြင်း၊ (iii) ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ အနှောင့်အယှက်ပေးခြင်း၊ ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့် ဝဘ်ဆိုက်ကို ရပ်တန့်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း သို့မဟုတ် (iv) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို ရပ်စဲခြင်း။ အခြားဝန်ဆောင်မှုများနှင့်/သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို ကြော်ငြာထားသော သို့မဟုတ် လက်ခံရရှိထားသော ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့် စပ်လျဉ်း၍လည်း ဤကန့်သတ်ချက်များကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။
e. (i) ဝဘ်ဆိုက်သည် သင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်မီမည်ကို အာမခံချက်မရှိပါ။ (ii) ဝဘ်ဆိုက်သည် အမှားအယွင်းမရှိ၊ 100% လုံခြုံသည်၊ အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းနှင့် အမြဲတမ်း အချိန်မှန်နေပါမည်။ (iii) ဝဘ်ဆိုက်’S ဝန်ဆောင်မှုများမှ ရရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရလဒ်များသည် အမြဲတမ်း ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး တိကျမှုရှိလိမ့်မည်၊ (iv) ရလဒ်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ အချက်အလက်များ၊ အကြောင်းအရာ သို့မဟုတ် ဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှရရှိသော အခြားပစ္စည်းများသည် သင့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီလိမ့်မည်၊ နှင့် (v) အကြောင်းအရာတွင် မှားယွင်းမှုများနှင့် အမှားအယွင်းများ ပြုပြင်ပေးမည် သို့မဟုတ် ပြင်ပေးပါမည်။
f. ဝဘ်ဆိုက်မှ သင်ရယူသည့် မည်သည့်အကြောင်းအရာကိုမဆို သင့်ကိုယ်ပိုင်အန္တရာယ်နှင့် ဉာဏ်အမြင်ဖြင့် ရယူသည်။ သင်၏ ကွန်ပြူတာစနစ် သို့မဟုတ် စက်ပစ္စည်းအား ပျက်စီးစေခြင်း သို့မဟုတ် ဒေတာများ ဆုံးရှုံးခြင်းမှ ရလဒ်များ ဖြစ်ပေါ်လာပါက၊ ၎င်းအတွက် သင့်တွင် တစ်ခုတည်း တာဝန်ရှိပါသည်။
g. ဝဘ်ဆိုက်နှင့် သင့်မကျေနပ်ချက်များကို တစ်ခုတည်းသော ကုစားချက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝဘ်ဆိုက်ကို အသုံးပြုခြင်းအား ရပ်စဲရန်ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ သင့်တစ်ဦးတည်းနှင့် သီးသန့်အခွင့်အရေးဖြစ်သည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်များကို အသုံးပြုခြင်းနှင့် ဆက်စပ်မှုမှ ပေါ်ပေါက်လာသော ကျွန်ုပ်တို့၏ အမြင့်ဆုံးတာဝန်ဝတ္တရားမှာ ဒေါ်လာ 100 (ဒေါ်လာ တစ်ရာကျော်) ထက်ကျော်လွန်နေပါသည်။
၁၄။ ဥပဒေရေးရာ အငြင်းပွားမှုများ
a. ဥပဒေအရ ခွင့်ပြုထားသည့် အတိုင်းအတာအထိ၊ ဤစည်းမျဥ်းများအပြင် မည်သည့်တောင်းဆိုမှု၊ အရေးယူမှု၏အကြောင်းရင်းများ သို့မဟုတ် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်လာနိုင်သည် သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကြားတွင်ဖြစ်ခြင်း၊ ဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်များကိုမထည့်သွင်းဘဲ Anguilla ၏ဥပဒေများကထိန်းချုပ်ထားသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ် တင်သွင်းလာသည့် စွပ်စွဲချက်များနှင့် တိုင်ကြားမှုများအတွက်၊ သင်သည် အန်ဂီလာရှိ တရားရုံးများ၏ သီးသန့်စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ဆိုင်းငံ့ထားရန်နှင့် သဘောတူခွင့်ပြုရန် သဘောတူသည်။ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်သင့်မှယူဆောင်လာသောစွပ်စွဲချက်များနှင့်တိုင်ကြားချက်များအတွက်၊ သင်သည် ANGUILLLA နှင့် တရားရုံးများ၏တည်နေရာနှင့်အခြားနေရာများတွင် သင်သဘောတူပြီးဖြစ်နိုင်သည် ။ ဤနည်းအားဖြင့် သင်သည် အဆင်မပြေ၍ မလျော်ကန်သော ဆက်တင်ကြောင့် အခြားနေရာရှာရန် သင့်အခွင့်အရေးများကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါသည်။
b. သင်သည် သင့်တစ်ဦးချင်း စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်သာမက မိသားစုဝင်များ စာသင်ကျောင်းတွင်သာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင်ပြီး စာသင်ခန်းတွင်သာ တိုင်ကြားနိုင်သည်ကို သင်သဘောတူပါသည်။ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားပြုလုပ်ဆောင်မှု။
c. ဤစည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်၊ သင်သည် ဤနေရာတွင် အစမ်းစစ်ဆေးခြင်းခံရနိုင်သည့် အခွင့်အရေးမှန်သမျှကို စွန့်လွှတ်ကြောင်း ဤနေရာတွင် အသိအမှတ်ပြုပါသည်။ ဝဘ်ဆိုဒ်နှင့် ဤစည်းမျဥ်းများအသုံးပြုခြင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော သို့မဟုတ် ဆက်စပ်နေသည့် သင်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့ကြား ပဋိပက္ခများအတွက် ဂျူရီလူကြီးတစ်ဦး။ အနုညာတစီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များ သို့မဟုတ် ဤပုဒ်မ၏ အခြားပြဋ္ဌာန်းချက်အမျိုးအစားတစ်ခုခုကို စွန့်လွှတ်လိုက်သည့်ကိစ္စတွင်ပင် ဤပြဋ္ဌာန်းချက်သည် အာဏာတည်စေရမည်။
a. ဤစည်းမျဥ်းများကို အခါအားလျော်စွာ မွမ်းမံပြင်ဆင်ထားသည့်အတိုင်း၊ သင်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြား သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုံးပါ၀င်ပြီး သင်နှင့် သင်ကြားရှိ ယခင်သဘောတူညီချက်များအားလုံးကို အစားထိုးရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ စာဖြင့်ရေးသားထားသော သဘောတူညီချက်မရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့အား ပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်ပါ။
b. ဤစည်းမျဥ်းများပါပြဋ္ဌာန်းချက်ကို လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲခြင်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေး သို့မဟုတ် မည်သည့်ပြဋ္ဌာန်းချက်ကိုမျှ စွန့်လွှတ်ခြင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုမည်မဟုတ်ပါ။
d. မည်သည့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းကိုမဆို ကုစားခွင့်များကို ဤစည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများတွင် ရည်ရွယ်ခြင်း သို့မဟုတ် မှတ်ယူခြင်း မရှိပါ။
e. ဤစည်းမျဥ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုတင်ရေးသားထားသောခွင့်ပြုချက်မှလွဲ၍ သင့်မှလွဲပြောင်း၍မရပါ၊ လိုင်စင်ခွဲပေး၍ တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်၊ သို့သော် လွှဲပြောင်းနိုင်သည် သို့မဟုတ်၊ အကန့်အသတ်မရှိ သို့မဟုတ် ကန့်သတ်ချက်များမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်တို့မှသာလျှင် တာဝန်ပေးအပ်သည်။
f. ဝဘ်ဆိုက်၊ အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ပုံမှန်မေးလ်များမှတစ်ဆင့် ကြေညာချက်များနှင့် သတိပေးချက်များကို ပေးဆောင်နိုင်သည်ကို သင်သဘောတူပြီး သဘောတူခွင့်ပြုပါသည်။
g. ဤစည်းမျဥ်းများဆိုင်ရာ ကဏ္ဍခေါင်းစဉ်များသည် လွယ်ကူစွာ နားလည်နိုင်စေရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဥပဒေ သို့မဟုတ် စာချုပ်ဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာမရှိပါ။
h. ဝေါဟာရ ” ဤစည်းမျဥ်းများအပါအဝင် ၂၂၂၂--၆--၂၂၂၂ ဤစည်းမျဥ်းများသည် ရှင်းလင်းချက်အတွက်ဖြစ်ပြီး၊ ထို့ကြောင့် ဥပမာအနေနှင့်၊ မချုပ်ချယ်ပါ။
i. ဤသဘောတူညီချက်ကို အခြားဘာသာစကားသို့ ဘာသာပြန်ပြီး အခြားနည်းဖြင့် မရှင်းလင်းသော သို့မဟုတ် ကွဲလွဲနေသောဗားရှင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေပါက၊ အင်္ဂလိပ်ဗားရှင်းကို ထိန်းချုပ်ရမည်။
a. MP3download.to မှ ပေးဆောင်သော ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သင့်တိုင်ကြားချက်၊ မေးခွန်းများနှင့် ရှင်းလင်းချက်များအတွက် ၎င်းတို့ကို [email protected]